Mushambadzi Betas Masikati: iOS uye tvOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye macOS 10.13.3 | IPhone nhau
Mushambadzi Betas Masikati: iOS uye tvOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye macOS 10.13.3
Masikati beta shanduro dzevagadziri veakasiyana maApple OS. Mune ino kesi isu tine ese beta beta dzakaburitswa: iOS uye tvOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye macOS 10.13.3. Asi yeavo vese isu tinogona kusimbisa pane zvishoma maererano nemaitiro, kunyangwe hazvo iyo iOS 11.2.5 ine nhau dzeSiri.
Uye ndezvekuti mushure medambudziko rekuchengetedza rakagadziriswa mune yepamutemo vhezheni yakatangwa nezuro neApple mairi yaive patched Kunyungudika uye Specter, Apple inosiya zvimwe zvebeta vhezheni kune vanogadzira. Mune idzi shanduro, zvigadziridzo zvinowedzerwa mukugadzikana uye mashandiro ehurongwa, pamusoro pekugadzirisa izvo zvakajairika zvikanganiso zvevashanduri vekare.
Shanduro dzakasiyana dziripo sekugara kubva kuApple Developer Center.Parizvino hatina yeruzhinji beta vhezheni yeIOS, tvOS uye macOS zviripo, asi isu tine chokwadi chekuti mumaawa mashoma anotevera ivo vachasvika kune avo vakanyoreswa muchirongwa cheApple beta.
Semazuva ese, iyo iOS beta haisvike yega uye neshanduro tvOS 11.2.5 beta, watchOS 4.2.2 uye macOS Yakakwira Sierra 10.13.3, yakawedzerwa kuwedzera izvo zvigadziriso zvebug uye kugadzikana kwesisitimu. Hatina nhau kana nhau dzakatanhamara mavari. Mune ino kesi, kurudziro yedu maererano neaya beta vhezheni ndeyekuti chinhu chakanakisa mune zvese zviitiko kusabuda munzira uye kusashandisa pane edu zvishandiso, kunyanya kudzivirira kukundikana kana kusapindirana nematurusi atinoshandisa muzuva redu -ku- zuva rinorarama.
Apple inoenderera ichishanda pane shanduro nyowani kudzikamisa OS yese kusvika pakakwirira, uye ngatitarisirei kuti izvo zvitsva zvegore rino zvinosvika pamwe neshanduko dzakakosha maererano nekushanda uye wadii, mukuyananisa pakati peIOS neMacOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Mushambadzi Betas Masikati: iOS uye tvOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye macOS 10.13.3
Netgear Arlo Baby Kamera inoenderana neApple HomeKit
Ruvara Nice Kusangana Nezviratidzo Zvinowanikwa kuKorea Yekutanga Apple Chitoro